चुइङगम खानुको यस्तो बेफाइदा ;चुइङगमले सबैभन्दा बढी स्मरणशक्तिमा ह्रास ल्याउने अनुसन्धानकर्ताको भनाई !!!::Nepal's Digital Paper
बुधबार, अशोज २९, २०७६ | Wednesday 16th October 2019
चुइङगम खानुको यस्तो बेफाइदा ;चुइङगमले सबैभन्दा बढी स्मरणशक्तिमा ह्रास ल्याउने अनुसन्धानकर्ताको भनाई !!!
बढी चिल्लोः बढी चिल्लो खानेकुरा खाने महिलाहरुको श्रवणशक्ति र स्मरणशक्ति हराउने एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।चुइङगमःचुइङगमले पनि श्रवणशक्ति हराउने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । चुइङगमले सबैभन्दा बढी स्मरणशक्तिमा हस ल्याउने अनुसन्धानकर्ताको भनाई छ
नुनिलोः नुनले ह्दयको चाल र रक्तचापलाई असर गर्छ । यसबाहेक नुनले दिमाग र समग्र स्मरणशक्तिलाई असर गर्छन् ।जंक फुडः जंक फुड कुलत हो । र, यो कुलतले दिमाग र स्मरणशक्ति गुमाउँछ । जंकफुडले डिप्रेसन र एंग्जाईटी समेत गराउँछ । जंक फुडले अल्जाईमर्स रोग लाग्छ ।
फ्राई खानेकुराः कतिपय स्वस्थ खानेकुरा पनि फ्राई गरेर खाँदा अस्वस्थ हुन्छ । जस्तै माछा खानुका स्वास्थ्यमा फाइदा हुन्छ । तर त्यही माछालाई फ्राई गरेर खाँदा स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याउँछ । अन्य खानेकुरा र मासु पनि फ्राई गर्दा दिमाग कमजोर र श्रवणशक्ति हराउँछ ।
चिनी : स्वास्थ्यको सबालमा चिनी जहिले पनि बेफाइदाजनक मानिन्छ । तोकिएको भन्दा बढी चिनि खादा दिमागमा अशर गर्ने पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ । चिनी बढी खाँदा समरणशक्ति हराउछ, सिक्ने क्षमता गुम्छ र श्रवणशक्तिमा समेत ह्रास आउँछ । एजेन्सी
महरालाई दशैमा दशा ! अक्सिजन र चिकित्सक तैनाथ, स्वास्थ्यामा सुधार,कोही पनि नेता भेट्न गएनन्
पोलेको मकै खानुका यस्तो अचुक फाइदा ; क्यान्सरदेखि मुटुरोगसम्मको लागि बहुउपयोगी …
भुलेर पनि नखानुहोस् एकै साथ यी दुई परिकारहरु , नत्र हुन् सक्छ यस्तो खतरा !!!
कुन भिटामिनले कस्तो रोग लाग्नबाट बचाउछ …
ओखर खानुका यस्ता अचुक फाइदाहरु ; डिप्रेसनदेखि मुटुरोगसम्मको सेवन
खुसीको खबर ; एक्कासी घट्यो सुनचादीको भाउ …
काठमाडौं । आज साताको चौंथो दिन (बुधबार) सुनको भाउ थोरै घटेको...
तीन दिनको मौसम ; वर्षाको प्रचुर सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमबिदको अनुरोध
काठमाडौं, २९ असोज । देशको पहाडी भु–भागमा आंशिक बदली र बांकी...
साहलाई चार दिन म्याद थपेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत को आदेश
२९ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोद साहलाई चार दिन म्याद...
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधिको पदका लागि आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदै
२९ असोज, काठमाडौं । नेकपाले आसन्न उपनिर्वाचनका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरुको नाम...
‘रोपेर फूल गोदावरी, सजाऔं घर आँगन वरिपरी’भन्ने नारा का साथ १३ औ गोदावरी मेला हुदै
काठमाडौं। ‘१३ औं गोदावरी फूलको प्रर्दशनी’ ललितपुरमा हुने भएको छ। नेपालीहरुको...
युटुबमा भाइरल भएकी समिक्षा अधिकारीले गाएको देउसी भैलो गीत यस्तो बन्यो-भिडियो
हिम सम्झौता डिजिटल प्रालिको प्रस्तुतीमा कलाकार नन्दराम परियारको ‘आयो तिहार भाग...
लालुमै पछिकै हिट भयो शिब हमालको सिलौटो
काठमाडौं । चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक बालकुमार श्रेष्ठले नयाँ गीत...
ज्ञानेन्द्रलाइ गोप्य रुपमा सी जिन फ़िङ्गले ३० मिनेटमा भेटेर के के कुरा गरे,के राजा आउने पक्का हो?हेरौ
२८ असोज , काठमाडौं । चीनको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको बिषयलाई लिएर...
आखिर किन राजीनामा दिए कप्तान पारस खड्काले ?
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले कप्तानीबाट राजीनामा...
देशभर कस्तो रहन्छ आजको मौसम ? हेर्नुहोस्
काठमाडौँ, २८ असोज । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अहिले नेपालमा उल्लेखनीय मौसमी...